Ny fitaratra natambatra ny fitoeran-drano vy dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo sy fisotro rano fitahirizana, fikarakarana fako, injeniera biogas, fitahirizana ny voamaina maina, petrochemical ary indostria hafa.
Ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana kely (biby manodidina ny 10000-20000) ary ny orinasa fambolena mahaleo tena sy amin'ny fanodinana ny vokatra.
Ho an'ny orinasam-pambolena sy ny tantsaha, Separation CSTR no safidy tsara indrindra, miaraka amin'ny tombony sy fahamailoana amin'ny fandidiana.
Izy io dia ampiharina amin'ireo zavamaniry famokarana biogas lehibe izay mila fitantanana amin'ny faritra samihafa na manasaraka, ary izy io dia mahomby kokoa amin'ny fitsaboana fako ivontoerana sy manokana.
Azo amboarina arakaraka ny filan'ny mpanjifa, ny haben'ny tanky, ny loko, ny seismika, sns.
Tsy mitovy ny fampiasana, ny tanky dia hafa, azontsika atao arak'izay ilain'ny mpanjifa, tankina efa namboarina ihany koa. Ny orinasanay dia manana tanjaka mahafeno ny zavatra ilainao.
Tankina ao anaty kamiao
Tantsambo miaraka amin'ny famolavolana tankina, mahomby kokoa ary fitahirizana ny habakabaka, izay matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fanodinana ny rano, sns.
Tankina fitahirizan-drano mitsingevana
Izy io dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana misy fiovana lehibe amin'ny akora. Azafady mba mifandraisa aminay raha manana fepetra ianao.
Tendrombohitra fitahirizana rano
Ny GFS TANK dia manome rano fitahirizana rano / rano tsara amin'ny faritra manokana (faritra be tendrombohitra, nosy, faritra tany an'efitra) .Nahoana izany? 1. Tombontsoa amin'ny fitaterana - Ny goavam-piaramanidina GFS dia miangona avy amin'ny takelaka vy vita amin'ny enamel. Tsy nahazo ny tankina rehetra izahay, dia nahazo ny plate plate. Afaka mandeha any amin'izay toerana halehan'ny olona ny fiara mifono vy. 2. Tombontsoa fanamboarana - rehefa tonga eo amin'ny tranokala ny takelaka vy, afaka mivory amin'ny alàlan'ny bolt izy ireo, mora tapaka ao anatin'ny fotoana fohy.Tsy mila matihanina, tsy mila vola lafo vidy ...
1 2 3 Next> >> Pejy 1/3